१ करोड लगानीमा “स्कुल हाउस” संचालन | khaltinews.com
१ करोड लगानीमा “स्कुल हाउस” संचालन
कोहलपुर- बाँकेको कोहलपुरमा सुविधासम्पन्न स्कुल हाउस सञ्चालनमा आएको छ ।
विद्यालयस्तरका विद्यार्थीहरुलाई मध्यनजर गर्दै पहिलो पटक कोहलपुरमा स्कुल हाउस संचालनमा आएको हो । यहि बिहिबार प्याब्सन बाँकेका अध्यक्ष डा. राजेश केशर खनाल, एन प्याब्सन अध्यक्ष कुबेर बस्नेत र कोहलपुर उद्योग व्यापार संघका उपाध्यक्ष चक्र बहादुर अधिकारीले संयुक्त रुपमा स्कुल हाउसको उद्घाटन गरेका छन ।
सगरमाथा स्कुल एण्ड स्पोट्स प्रा.लि. ले विद्यार्थी तथा विद्यालयलाई आवश्यक सम्पूर्ण सामग्रीहरु एकै ठाउँमा उपलब्ध गराउने हेतुले हाउस संचालनमा ल्याएको स्कुल हाउसका संचालक अर्जुन सुवेदीले जानकारी
दिए । सम्पूर्ण खेल सामग्रीहरु समेत सहजै उपलब्ध गराउने ब्यवस्था मिलाइएको बताउँदै सुवेदीले मध्यपश्चिममै पहिलो पटक स्कुल हाउस संचालनमा आएको जानकारी दिए ।
करिब १ करोड लागतमा संचालनमा आएको स्कुल हाउसले स्थानिय उत्पादनलाई प्रोत्साहक गर्नुका साथै स्थानिय स्तरमा रोजगारीको अवस्था सृजना गरेको स्कुल हाउसका संचालक यम रावतले बताए । हरेक कारोबारको लागि भारतीय बजारको भर पर्नुपर्ने अवस्थाबाट छुटकारा दिलाउन पनि स्कुल हाउस सार्थक रहने उनले जिकिर गरे ।
सिमासँग जोडिएका शहरहरुमा हरेक सामग्रीहरु सिमापारीबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ । त्यसैको मार खेप्दै आएका कोहलपुरवासीहरुले स्कुल हाउस संचालन आएसँगै राहत महशुस गर्ने संचालकहरुले दाबी गर्दै आएका छन ।
पछिल्लो समय बाँकेको कोहलपुरमा समेत ठुलो लगानीका ब्यवसाय संचालन हुने क्रम बढेको छ । मध्यपश्चिमकै प्रवेशद्धारको रुपमा रहेको कोहलपुरमा बिकासले गति लिएसँगै ब्यापारीहरुले लगानी बढाउन थालेका छन । बिभिन्न संघसंस्थाले आप्mना शाखा कार्यालयहरु कोहलपु केन्द्रित गर्ने क्रम समेत बढको छ । जसले गर्दा ब्यापारीहरुलाई प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रुपमा फाईदा पुग्दै आएको कोहलपुर ब्यापार संघका महासचिव केशव धितालले बताए ।